Ka ilaali heshiiska kirada hemp aad heshiis qoraal ah
Kireynta Hemp Farm ama Suuqa Wadaagidda
Miyaan kiraysan karaa beertayda hemp?
Haddii qofka beerta lihi uu haysto ruqsad si uu u koraan hemp, waxaad u badan tahay waad kiraysan kartaa beerahaaga. Beeraleyda celcelis ahaan ma wada dhammaan dhulka uu ku nool yahay. Iyo, gudaha Illinois, dalabka shatiga beerta hemp wuxuu u oggolaanayaa codsade inuu muujiyo inuu kiraystay beerta uu damacsan yahay inuu ku koro.
Maxaa loogu heystaa heshiis kiro beereedka beerkaaga u gaarka ah?
Beero badan ayaan lahayn heshiis qoraal ah, ama heshiiska kirada qoran waa da 'toban sano. Gobolka Illinois dadku waxay lahaan karaan heshiis ijaarasho oo afka laga qaato, laakiin hemp uma eka sida digirta ama soy - hemp waxay u baahantahay ruqsad ay ka hesho gobolka waxayna leedahay xanibaado ka dhan ah cidda koraysa ama maareyn doonta. Marka waa fikrad fiican inaad beertaada kaga ilaaliso heshiis qoraal ah.
Waxaan ka wada hadli doonnaa qaababka guud ee lacag bixinta ee kirooyinka beerta waxaanan bixinaa seddexda faa'iidooyin ee ugu sareysa lahaanshaha heshiis qoraal ah oo ku saabsan ganacsigaaga wax soosaarka ee hemp. La tasho a hemp qareen ku saabsan ganacsigaaga si aad u hubiso ilaalinteeda khataraha aan la aqoon.
Kiro Kaash ah ama Lacag Bixin ah oo Lagu Bixiyo Lacagta Kirada Beeraha
Kirooyinka beeraha waxay ku dhacaan laba kooxood oo waaweyn: Kirada Lacagta, ama Wadaagida Dalagyada. Magaalada Illinois, oo ah halka sanadka 2019 uu noqon doono sanadka ugu horreeya ee hemp la waraabiyo, ama nooca kireysiga ayaa ah mid aad u caadi ah. Kireynta beeruhu waxay u egtahay inay ugu yeedho kiro lacag caddaan ah sida loogu yeero wadaagista dalagga, laakiin hemp waxaa laga yaabaa inay nafteeda ku amaahato saamiga dalagga sababaha hoose looga wada hadlay.
Sadexda Faa'iidadood ee Kireynta Beeraha Qoraalka ah
u hoggaansanaanta dhaqamada ugu wanaagsan ee warshadaha
si cad u qeex ereyada heshiiska ilaalintii beeraleyda iyo milkiilaha
u dejiso shuruudaha lacag bixinta sida "kirada lacagta" ama "wadaagida dalagga"
Ijaarka beerta kaashka ah waa mid fudud oo fudud, waa lacag kiro ah. Beeraley hemp wuxuu dul dhigay hal doolar inta uu bixinayo halkii acre. Badanaa laba lacag bixin oo kiro ah ayaa yimaada sanadka dalagga, mid wuxuu dhacayaa 1-da Maarso, kan kalena wuxuu ku saabsan yahay Oktoobar 1-deeda, ama goorta goosashada soo galay si dalagga looga beddelo.
Dalagga waxaa badanaa lagu iibiyaa suuqleyda hadhuudhka sannadka oo dhan - laakiin maadaama 2019 uu yahay sanadkii ugu horreeyay ee dalagga - suuqgeynta hadhuudhka iyo qandaraasyada mustaqbalka looma adeegsan karo in lagu iibiyo dalaga si xor ah sida badeecadaha kale.
Beeraha lacagta kirada ah wuxuu kireystaa ganacsiga kaqaybqaata faa iidada ka timaadda iibinta dalaga iyadoo la saadaalinaayo xaddiyo gaar ah oo kiro ah oo sidaas noqon doona.
Kirooyinka Beeraha Beeraha looma baahna inay noqdaan qoraal - laakiin joojinta beerta ugu yar ayaa leh.
Heshiisyada Wadaag Dalagyada
Markii uu beeralayda iyo milkiiluhu isku afgartaan in ay ka wada shaqeeyaan sidii ay u kori lahaayeen uguna goosan lahaayeen dalagga, markaa qayb-qaybsi dalag ah ayaa la abuuri karaa Qayb dalag ah ayaa sidoo kale loo odhan karaa beero kireyste. Mulkiilaha dhulku wuxuu iska daayaa cayrkiisa, ninka beerta leh ayaa siiya shaqada iyo qalabka, oo labaduba waxay ku wadaagaan faa'iidada ama khasaaraha.
Qarxa suuqa Cannabidiol (CBD) ayaa riixaya wax badan oo ka mid ah hawlihii wax soosaarka ee warshadaha. Beeraley badan oo soo galaya warshadaha ayaa raba in ay u koraan hemp sida dalag ka lacag fiican kan hadda jira. Kooxda Brightfield aaminsan yahay in CBD ay noqon doonto warshadaha $ 22 bilyan oo doollar dhowr sano gudahood.
Sababtoo ah dhaqaalaha suuqa, iyo xiisaha leh warshadaha, heshiisyada wadaagga dalagga ayaa laga yaabaa inay siiyaan beeralleyda hemp hab ay macaashka ula wadaagaan milkiileyaasha guryaha. Qoddobada heshiiska si loogu qoondeeyo kharashyada iyo faa'iidooyinka waxaa loo qori karaa qaab kasta oo ay beeraleyda iyo mulkiiluhu doonayaan.
Muxuu yahay Farm Heshiiska yaa ugu Fiican Beertaada Hemp?
Taasi waxay kuxirantahay waxaad rabtid heshiis ijaareedka. Ma dooneysaa lacag bixinno la saadaalin karo iyo milkiilaha inuu ka fogaado ganacsiga beeraha? Kadib, tixgeli ikhtiyaarka kirada lacagta ah. Laakiin iska ilaali kor u kaca CBD si ay u burqato iyo qiimaha heerarka hodanka ah ee CBD inuu hoos u dhaco. Qiimaha hoos udhaca wuxuu ka dhigi karaa lacag-bixinta kirada sarre mid xanuun badan beeralleyda hemp.
Milkiilaha dhulku miyuu leeyahay riyadiisa u gaarka ah inuu ka faa'iideysto suuqa 'CBD market Bonanza', oo xiriir fiican la leh milkiilaha hemp? Markaa heshiiska saami qaybsiga wuxuu u sahlayaa labada dhinac inay u kala jabaan kharashaadka iyo faa'iidooyinka warshadaha cusub ee hemp.
Ma jiro hal jawaab oo sax ah, laakiin waxaa jira hal sabab weyn oo ah in heshiiska kirada hemp uu noqdo qoraal.
Hemp waa mid cusub oo aad loo nidaamiyay
Hemp waxaa la abuuri karaa oo keliya haddii qofka beerta leh uu haysto rukhsad siinaysa awoodda uu ku koro. Beeraley hemp kama shaqeysan karo hemp hadii uusan aheyn xitaa loosoosaaray sida hemp processor. Gobolku wuxuu eegi doonaa hemp oo wuxuu arki doonaa in howlaha ay yihiin kuwo hagaagsan.
Kaliya maahan heshiiska kirada hemp beerka ee qorani waxay bixisaa shuruudaha saxda ah ee heshiiska ee labada dhinacba leeyihiin, waxay sidoo kale muujineysaa in beertaada hemp ay u hoggaansan tahay dhaqamada ugu wanaagsan ee warshadaha. Lahaanshaha siyaasado iyo habraacyo loogu talagalay beerta hemp-ka ah waxay ka caawin doontaa inay sii ahaato mid u hoggaansanaanta iyo joogsashada wanaagsan ee gobolka shati siinta ruqsadda hemp.
Nasiib wacan abuurida dalagaaga cusub. Soo wac haddii aad jeceshahay inaad qareenkeena kala hadashid mashruucaaga hawleed.